Ucwaningo luqinisekisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ezimileni nasezilwaneni zaseYurophu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinga lokushisa lomhlaba wonke landa ngokushesha kunezinhlobo eziningi ezingakwazi ukuzivumelanisa nezimo. Eminyakeni engama-37 edlule, kube nokwanda kwama-1,11 degrees, okungabonakala kungabalulekile; nokho, iqiniso lihluke kakhulu.
Lolu shintsho, noma luluncane kangakanani, kubangela umthelela omkhulu emvelweni, njengoba kuqinisekiswa ngucwaningo lwezinhlobo zezilwane nezitshalo eziyi-1166 ezenziwe nguDiana E. Bowler, waseSenckberg Biodiversity and Climate Research Centre (eJalimane), kanye nabanye abacwaningi abavela eRey Juan Carlos University of Madrid naseNational Museum weSayensi Yemvelo (CSIC).
Izilwane nezitshalo kujwayele ukuhlala endaweni ethile, kangangoba uma uthatha isilwane saseNordic uye ehlane laseSahara, ngokwesibonelo, sizoba nesikhathi esibi kakhulu futhi sibe nobunzima obuningi bokuzivumelanisa; Ngakolunye uhlangothi, ukube isilwane esifanayo besisendaweni lapho isimo sezulu besifana naleso esisuka kuso, besizokwazi ukuzivumelanisa nezinkinga futhi singaze sibe semvelo futhi siqede uhlobo lwendalo.
Lokhu, noma ngabe kuyisibonelo nje, sekuvele kuyenzeka. Izinhlobo zomhlaba ezijwayele ukuhlala ezindaweni ezifudumele ziyanda ngenkathi inani labantu bezindawo ezibandayo lincipha. Futhi uma sikhuluma ngezilwane zasemanzini, ngokusho kocwaningo, izinhlanzi ezivela emanzini apholile ziya eNorth Sea, lapho izinga lokushisa lipholile.
Ukufinyelela lezi ziphetho, Abaphenyi bahlaziye ukuhlanganiswa kwezifundo zabantu abangu-1758 bendawo, nezinhlobo eziyi-1166 zamakilasi angama-40, phakathi kwazo obekuyizilwane ezincelisayo, izinyoni, ubulembu, izitshalo, njll. Kuze kube manje, kuphela uhlobo olulodwa, ezimbili noma eziphezulu ezintathu kuphela ebesephenyiwe. Lolu uphenyo lokuqala lokuqoqa inani elikhulu kangaka lezilwane nezitshalo.
Ngenxa yalezi zinhlobo zezifundo, »singanikeza izimpendulo zeminye yemibuzo ebaluleke kakhulu yemvelo yesikhathi sethu, kusho uBowler.
Ungayifunda lapha (KungesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ucwaningo luqinisekisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ezimileni nasezilwanyaneni zaseYurophu
Ukuguquka kwesimo sezulu kwi-Mars